China paper insole board ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံ Wode
အရွယ်အစား: ပုံမှန်အားဖြင့် 1.00mx 1.50m (သို့) ဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ
အရည်အသွေး: 555,001,517,608, ရွေးချယ်မှုများအတွက်အမျိုးမျိုးသောအရည်အသွေး
အလေးချိန် အရည်အသွေးနှင့်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဆက်သွယ်ပါ
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Moontex, Eurotex
ထုပ်ပိုး: အိတ်လျှင် ၂၅ အုပ်
လိပ်ပုံစံဖြင့်ထုပ်ပိုးပြီး၊ လိပ်အရွယ်အစားသည်များသောအားဖြင့် ၃၆ လက်မ x ၃၀ x ၃၆ x x မီတာဖြစ်ပြီးအချင်းမှာ ၂၇ စင်တီမီတာခန့်ရှိသည်။ လိပ်ကိုထုပ်ရန်ခိုင်ခံ့သော PE ကြည်လင်သောပလပ်စတစ်အိတ်များကိုအသုံးပြုသည်။ လိုအပ်ပါကယက်အိတ်များကိုလိုအပ်လျှင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများနှင့်အတူ 1.High အရည်အသွေး။
2. ကုန်ကြမ်းမှသည်အရောင်ခြားနားမှုထိန်းချုပ်မှုအထိ၊ သေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအထိအာရုံစိုက်သည်။
3. အသံသွင်းထားသည့်အသံမြည်သည့်ကွင်းသည်ကုလားကာများဆွဲသောအခါဆူညံသံကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊ ကုလားကာများကပိုမိုချောမွေ့စေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်သုတေသန၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများအားအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသောစက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကဖိနပ်ပစ္စည်းစျေးကွက်များမှာဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့တောင်အာရှနှင့်အခြားဒေသများဖြစ်သည်။
A: နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းထုတ်ကုန်ဘရိုရှာကိုလည်းသင့်ထံပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Canton Fair သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံခြားပြပွဲတွင်ပါ ၀ င်ပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့တဲသို့လည်းလာရောက်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်သတင်းစကားကိုကြင်နာစွာထားခဲ့ပါသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
A5: တစ်နည်းကတော့သင်ဝယ်ယူမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Email (သို့) Fax ဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည်။ ထို့နောက်သင့်အတွက် Proforma ငွေတောင်းခံလွှာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပ်နှံခြင်းအတွက်ပေးချေရမည်။ ထို့နောက်သင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုစီစဉ်ပေးသည်။ အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်သည်အွန်လိုင်းကိုတိုက်ရိုက်မှာယူနိုင်သည်၊ သင်၏အာမခံအာမခံချက်ကိုသင့်အားပေးနိုင်သည်၊ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိသည်။ သင်၏ third party ၀ န်ဆောင်မှုခံထားရသောကြောင့်သင်သည်သင်၏တောင်းဆိုမှုထုတ်ကုန်များကိုရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ထုတ်ကုန်များ (သို့) အထုပ်များပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Logo သို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိပါသလား။
A: သေချာပါသည်။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုသင်၏တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ပူခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထိုးခြင်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ ပိုးသားပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စတစ်ကာဖြင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ဖိနပ် Insole Shank ဘုတ်အဖွဲ့
နောက်တစ်ခု: Insole အတွက်စက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ဖိနပ်များအတွက် 1.75mm စက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ဖိနပ်များအတွက် 2.0mm စက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ဖိနပ်အဘို့ Insole စက္ကူဘုတ်အဖွဲ့
အီဗာနှင့်အတူစက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ဖိနပ်အဘို့ဖိနပ် Insole ပစ္စည်းစက္ကူဘုတ်အဖွဲ့
Insole အတွက်စက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့
ဖိနပ် Insole ပစ္စည်းစာရွက်, တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်မဟုတ်သည့်အထည်, Eva အမြှုပ်နှင့်အတူ Laminated Nonwoven အထည်, အီဗာနှင့်အတူစက္ကူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့, Eva နှင့်အတူရက်ကန်းထည်, အီဗာနှင့်အတူ Insole ဘုတ်အဖွဲ့,